काठमाडौंको मेयरमा जित्ने सम्भावना सबैभन्दा बढी कसको ? चर्चित पत्रकार विजयकुमारले नामै भनिदिए – Annapurna Post News
May 11, 2022 sujaLeaveaComment on काठमाडौंको मेयरमा जित्ने सम्भावना सबैभन्दा बढी कसको ? चर्चित पत्रकार विजयकुमारले नामै भनिदिए
काठमाडौं । देशकै संघीय राजधानी काठमाडौंको मेयर को बन्ला भन्ने चासो देशभर छ । मुख्यतः तीन जना उम्मेदवार काठमाडौं महानगरको मेयरका लागि मुख्य प्रतिस्पर्धी देखिएका छन् । नेकपा एमालेबाट केशव स्थापित, गठबन्धनको तर्फबाट सिर्जना सिंह र स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाहबीच मुख्य चुनावी भिडन्त हुने देखिएको छ ।
यसै सिलसिलामा वरिष्ठ पत्रकार विजयकुमार पाण्डेले फेसबुक÷ट्विटरमार्फत काठमाडौं महानगरको चुनावी माहोलबारे आफ्नो विचार सार्वजनिक गरेका छन् । काठमाडौंमा कांग्रेस उम्मेदवार सिर्जना सिंहको पक्षमा माहोल बनेको उनको आँकलन छ ।
एक महिलाले सिर्जना सिंहलाई आशीर्वाद दिइरहेको तस्वीरसहित पाण्डेले लेखेका छन्, ‘पछिल्ला केही दिनमा सिर्जना सिंहले आफ्नो स्थिति निर्णायक रुपमा मजबुत बनाएको देखिन्छ ।’ पाण्डेले चुनावका फैसला अब मिडिया र सञ्जालबाट मतपेटिकामा पुगेको उल्लेख गरेका छन् । स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेनको पक्षमा सामाजिक सञ्जालमा देखिएको समर्थनलाई लक्षित गर्दै उनले नेपालमा मिडिया वा सोसल मिडिया र मतपेटिकाबीच ठूलै खाडल हुनसक्ने पनि टिप्पणी गरेका छन् ।
पछिल्ला केही दिनमा @Sirjana_Singh ले आफ्नो स्थितीमा निर्णायकरुपमा मजबुत बनाएको देखिन्छ। तस्वीरमा एक महिला, सृजना सिंहलाई आशिर्वाद दिदै -'विजयी भव!' pic.twitter.com/VN7OeqqCBy
मेयरमा फराकिलो मत अन्तरले बालेन शाहको अग्रता